ချစ်ဇနီးလေးသုသုနဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီး – CHAR TAKE
ချစ်ဇနီးလေးသုသုနဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီး
02/04/2022char take0 Comments
ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ဇနီးမောင်နှံတော့ လက်ရှိမှာ မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ အရေးတွေကြောင့် ဖမ်းဝရံ ထုတ်ခံထားရ ပေမဲ့လည်း ဇွဲမလျှော့ဘဲ အမြဲတမ်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း ဝေဖန်ခံရမှုတွေ တစ်ချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ နောက်မဆုတ်ဘဲ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရှိနေပေးလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်‌တွေကို ရယူထားနိုင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုက ပီပြင်လွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ကျရာဇာတ် ကောင်တွေမှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် နိုင်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ အကယ်ဒမီ မင်းသမီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုက တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းထွက်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အားတက်သရော ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅ ကနဲ့မတ ရား အမှုဖွင့်ခံရထားပြီး ဘေးကင်းရာကို တိမ်းရှောင်နေရပါတယ် ၊ တိမ်းရှောင်နေစဉ် အတောအတွင်းမှာလဲ လူမှူကွန်ယက် ကနေ ပြည်သူများ အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် စာသားတွေကို ရေးသားဖော်ပြလေ့ ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဦးဏကြီးကို မေးလိုက်တယ်။ သုသုမွေးနေ့ ရောက်တော့မယ်နော်. ” မွေးနေ့လက်ဆောင် ဘာပေးမှာလဲ ” လို့သူကလည်း မိန်းမပါးစပ်ဟလိုက်တာနဲ့ သိနေပြီ … ” ဘယ်ကို လှူချင်လို့လဲ ” တဲ့ ခက်ခဲကြပ်တည်းနေတယ် ဆိုတာနားလည်ပေမယ့် “Dragon fly” လှူချင်တာလို့ Bank account တွေဘာတွေ ဘာမှမရှိသော်လည်း
bank account ရှိသူ သူ့သူငယ်ချင်း အကိုကြီး စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ ‌ ဒေါ်သုလေး အစောဆုံးမွေးနေ့ လက်ဆောင် ရသွားပါပြီ၊ April born လေးတွေ ကိုကိုတွေ မောင်တွေကို မွေးနေ့လက်ဆောင် တောင်းလို့ရတယ်နော်ဆိုပြီး ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်နော် .. သုသုတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ နိုင်ငံအပေါ်မှာ လူရော ငွေအားရော ပေးဆပ်နိုင်မှုကတော့ အံ့မခန်းပါပဲနော် ပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေးကြပါအုံးနော် ။ crd
Zawgyi … ခ်စ္ဇနီးေလးသုသုနဲ႔ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္ဆိုတာ သက္ေသျပလိုက္တဲ့ ဒါရိုက္တာ ဏႀကီး
ဒါရိုက္တာ ဏႀကီးနဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို့ ဇနီးေမာင္ႏွံေတာ့ လက္ရွိမွာ ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အေရးေတြေၾကာင့္ ဖမ္းဝရံ ထုတ္ခံထားရ ေပမဲ့လည္း ဇြဲမေလၽွာ့ဘဲ အျမဲတမ္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အြန္လိုင္းေပၚမွာလည္း ေဝဖန္ခံရမွုေတြ တစ္ခ်ိဳ့ရွိခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ ရဲရဲဝင့္ဝင့္ ရွိေနေပးလို့ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အခ်စ္‌ေတြကို ရယူထားနိုင္သူေလး ျဖစ္ပါတယ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္ၿဖိဳးသုက ပီျပင္လြန္းတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်ရာဇာတ္ ေကာင္ေတြမွာ အေကာင္းဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ နိုင္တာေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္အားေပးမွုကို အခိုင္အမာ ရရွိထားတဲ့ အကယ္ဒမီ မင္းသမီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပိုင္ၿဖိဳးသုက ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာလဲ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ လမ္းထြက္ကာ လူထုလွုပ္ရွားမွုေတြမွာ အားတက္သေရာ ပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅ ကနဲ႔မတ ရား အမွုဖြင့္ခံရထားၿပီး ေဘးကင္းရာကို တိမ္းေရွာင္ေနရပါတယ္ ၊ တိမ္းေရွာင္ေနစဥ္ အေတာအတြင္းမွာလဲ လူမွူကြန္ယက္ ကေန ျပည္သူမ်ား အတြက္ခြန္အားျဖစ္ေစမယ့္ စာသားေတြကို ေရးသားေဖာ္ျပေလ့ ရွိပါတယ္။
ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ ဦးဏႀကီးကို ေမးလိုက္တယ္။ သုသုေမြးေန႔ ေရာက္ေတာ့မယ္ေနာ္. ” ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ဘာေပးမွာလဲ ” လို့သူကလည္း မိန္းမပါးစပ္ဟလိုက္တာနဲ႔ သိေနၿပီ … ” ဘယ္ကို လွူခ်င္လို့လဲ ” တဲ့ ခက္ခဲၾကပ္တည္းေနတယ္ ဆိုတာနားလည္ေပမယ့္ “Dragon fly” လွူခ်င္တာလို့ Bank account ေတြဘာေတြ ဘာမွမရွိေသာ္လည္း
bank account ရွိသူ သူ႔သူငယ္ခ်င္း အကိုႀကီး စီစဥ္ေပးမွုနဲ႔ ‌ ေဒၚသုေလး အေစာဆုံးေမြးေန႔ လက္ေဆာင္ ရသြားပါၿပီ၊ April born ေလးေတြ ကိုကိုေတြ ေမာင္ေတြကို ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ေတာင္းလို့ရတယ္ေနာ္ဆိုၿပီး ေရးသားလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္ .. သုသုတို့ ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ့ နိုင္ငံအေပၚမွာ လူေရာ ေငြအားေရာ ေပးဆပ္နိုင္မွုကေတာ့ အံ့မခန္းပါပဲေနာ္ ပရိသတ္ႀကီးလည္း အားေပးၾကပါအုံးေနာ္ ။ crd